SlideMe, Suuqa kale ee Android | Androidsis
SULDAANKA, SUUQA KALIYA EE ANDROID
SlideMe waa a Suuqa Android beddel u ah midka aan naqaanno oo taasna ay ku timaaddo asaas ahaan saldhigyadeenna. Si tan loo helo Suuqa Waa inaad kala soo degtaa arjiga la yiraahdo SAM oo hadda ku jira nooca 3.1, dhamaadka ayaan saaray QR code isku mid ah ama marin u hel bogga waa oo ka soo degso kombiyuutarkaaga ka dibna nuqul kaarkaaga oo ku rakib.
Sida aad ku arki karto sawirka waa a suuqa qaabka aan ognahay, oo loo qaybiyay qaybo isla markaana kuwan ka kooban yihiin codsiyo iyo ciyaaro. Codsi kasta ama ciyaar kasta waxay leedahay sharraxaad ballaadhan oo ku saabsan, ha ku koobnayn naftaada ereyga xaddidan ee Suuqa Android rasmiga ah, marka lagu daro shaashadaha shaashadda, in ka badan laba, iyo xiriiriyeyaal fiidiyowyada dalabka ee YouTube-ka. Sidaad u jeeddo, wuu garaacayaa suuqa rasmi ah goordhow.
Ku saabsan raadinta ereyada, way ka fiican tahay mashiinka raadinta ee suuqa rasmi ah, waxay leedahay cillado qaarkood laakiin natiijooyinka waxaa ku jira ereyada aad raadineyso.
Ahaanshaha suuq beddel ah, ma laha tiro isku mid ah oo codsiyo ah kan rasmiga ah, laakiin waxaa jira tiro aad u tiro yar, oo labadaba la bixiyo iyo mid bilaash ah. Waxaa loogu talagalay horumariyeyaasha aan marin u helin suuqa rasmiga ah ama cidda haysata, doonaysa qaabab kale oo iib ah. Marka la eego macaamilka, way u furan tahay qof walba.
Si aad ubixiso arji, waa inaad marka hore iska diiwaangelisaa degelkeeda oo aad yeelataa kaarka amaahda qaabeynta taas oo iibsiga lagu soo oogay. Waa hab kale oo loo helo codsiyo noo ah Android-es.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » SULDAANKA, SUUQA KALIYA EE ANDROID
Akhristaha PDF ee kiniiniyada bq verne
Ku jawaab Manuelrufian
QAABILAYAASHA QORAALKA, KU QABUUL QORAALADA ADIGA ANDROID